NextMapping | Mustaqbalka Shaqada ayaa Hada ah
Mustaqbalka Shaqada ayaa Hada ah - Diyaar ma Ahayd?
Maxey noqon doonaan hogaamiyaasha iyo kooxahoodu inay sameyaan si ay horumar u gaaraan maanta iyo wixii ka dambeeya sanadka 2030? Caqabadaha maanta jira waxaa ka mid ah isbeddelka joogtada ah ee adduunka, hal-abuurnimada tikniyoolajiyada iyo isbeddelada deg degga ah ee goobta shaqada.
Isbeddellada, aragtiyaha iyo cilmi baarista mustaqbalka shaqada
Kaqeybgalka shaqaalaha, sameynta hogaamiyaasha u diyaarsana mustaqbalka, soo jiidashada iyo joogtaynta kartida sarsare waa dhamaan waxyaabaha si dhaqso ah u badalaya oo saameyn ugu yeelaya sida aan u shaqeyno iyo sida aan ugu baahanahay inaan badalno si aan ulanocano caqabadaha goobta shaqada mustaqbalka.
Furahaani wuxuu bixin doonaa fikradaha ganacsi ee cilmi baarista, fikirka xanaaqa, hal abuurka, hogaaminta fikradaha iyo istiraatiijiyadaha sida hogaamiyayaashu u qaadi karaan ficil deg deg ah si loo kordhiyo kooxda iibsashada, laqabsashada iyo fulinta NOW sida aan ugu sii jeedno 2030.
Hoos u eeg isbeddelada iyo teknolojiyada qaabaynta mustaqbalka shaqada maanta
Fikradaha hogaamiyaasha iyo kooxahooda si ay ula qabsadaan qaabkooda shaqsiyeed iyo qaabka hogaaminta ee goobta shaqada isbedelaya
“Sidee” in si guul leh loola shaqeeyo oo looga hawl galo jiil badan oo goobta shaqada ah
Fikradaha sida hogaamiyayaashu u baahan yihiin inay la qabsadaan xaqiiqada weligeed is beddeleysa ee hab dhaqanka shaqaalaha iyo u beddelashada aragtiyaha daacadda, qanacsanaanta shaqada iyo sida shaqada loo qabto
Moodlaha Mindset ee ku saabsan sida loogu socdo xawaaraha isbedelka dhaqsaha badan maadaama aan u sii jeedno mustaqbalka shaqada
Daraasad ku saabsan fahamka badan ee loo baahan yahay si loo maro mustaqbalka shaqada
Daraasadaha kiisaska iyo tusaalooyinka shirkadaha horumarineed iyo hogaamiyaasha safka hore ee abuuritaanka goobo shaqo oo diyaarsan mustaqbal cusub
Istaraatiijiyadaha ku saabsan sida qof walba ugu dhex geli karo himilada guud ee mustaqbalka, loo dhiso farxad ku saabsan jihada shirkadda loona abuuro ballan qaad iyo soo iibsasho in tallaabo laga qaado maanta iyo mustaqbalka
Qaabka Cheryl waa mid firfircoon oo tamar sare leh iyo is-dhexgal, waxay soo bandhigtaa cilmi-baaris ku habboon oo soo bandhiggeedu marwalba waxay leeyihiin xiisaha filim iyo muusig. Iyada oo Cheryl Cran uu yahay furahaaga hadalka ayaa waxaa laguu balan qaadayaa inaad lahaato mid ka mid ah dhacdooyinkaaga ugu fiican abid iyadoo la kordhinayo kaqeybgalka dhagaystayaasha, iyo dhagaystayaal ka tagaya si fudud oo loo meel mariyo fikradaha sidoo kale dhiirigelinaya in lagu hogaamiyo aragtida 2030 si loo dhiso goobta shaqada mustaqbalka maanta.
Cheryl Cran waxay ahayd xiritaanka furaha furaha khudbadeena Tours waayo-aragnimada Shaqaalaha ee Atlanta iyo Chicago, iyaduna waxay ahayd ifafaale! Awood aad u weyn si ay maalinta u xidho ugana tagto kaqeybgalayaashu dhiirigelinta waxqabadka.
Mustaqbalka baarista Cheryl ee baarista shaqada ayaa iftiimisay baahida loo qabo in diirada la saaro khibrada shaqaalaha taas oo micnaheedu yahay abuurida khibrad macaamiil weyn. Waxay siisay labada fikradood iyo xalalka hogaamiyaasha inay mustaqbalkooda shaqo diyaar u noqdaan. Jawaab-celinta kaqeybgaleyaashu aad bay u fiicnaayeen wayna jeclaayeen sida Cheryl runtii iyaga uga dhigtay fikirka!
Cheryl wuxuu ahaa xidig kooxeed run ah. Dhacdooyinkayagu waxay ahaayeen guul weyn, waxaanan uga mahadnaqaynaa qaybteedii taas.